Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » ‘आलमलाई पनि इँटाभट्टामा हाल्नुपर्छ’
काठमाडौँ – बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएका पूर्वमन्त्री तथा रौतहट–२ का कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमले पक्राउका क्रममा प्रहरीसँग नै ‘मान्छे मार्ने’ धम्की दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछी धेरैले आलम प्रती आक्रोस ब्यक्त गरेका छन ।
सर्बसाधारण नागरिकले सामाजिक सन्जालमा उनको ब्यापक बिरोध गर्दै आलमलाई पनि जिउदै इँटाभट्टामा हालेर जलाउनु पर्ने सम्मको माग गरेका छन । आलमलाई जोगाउन दर्जनौ वरिष्ठ वकिलहरु लागेपनी आखिर उनी जेल पुगेका छन ।
२ मिनेट २४ सेकेन्डको भिडियोमा उनले प्रहरीलाई यसो भनेका छन् :
आलम* तपाईंले मलाई ठट्टा ठान्नु भा’छ ?
प्रहरी* कहाँ हामीले ठट्टा ठानेका छौं हजुर -? माननीयज्यूलाई हामी सम्मान गर्छौं । जयनेपाल, नमस्कार भनेका छौं ।
आलम* (गाडीमा हात बजार्दै) हँ… यो जिल्लामा आग (आगो) लाग्छ, आग ।
प्रहरी*शान्तिसुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्नु तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो नि ।
आलम* यो जिल्लामा आग (आगो) लाग्छ । तपाईं हेर्दै जानुस् । भारतबाट मानिस… (उनी आफ्नो मोबाइल फोन हेर्छन्)
प्रहरी* त्यस्तो भन्न मिल्दैन हजुर ।
आलम* मैले वारात (विवाह) बाट आउँछु भनेर रिक्वेस्ट गरेँ । म तपाईंको के हो ? म डकैत हुँ ? डकैतको व्यवहार गर्नु भा’छ तपाईंले ।
प्रहरी* हैन माननीयज्यू ।
आलम* अब जिल्लाभर अशान्ति हुन्छ । आगो लाग्छ ।
प्रहरी* माननीयज्यू, अशान्ति हुन्छ, आगो लगाउँछु, मान्छे मार्छु भन्न कहाँ मिल्छ ?
आलम* (चिच्याउँदै) हँ… एकदम हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।
प्रहरी* त्यसो भन्न हुँदैन हजुर ।
आलम* (प्रहरीतर्फ औंला ठड्याउँदै) तपाईं (डीएसपी नवीन कार्की) र एसपी (भूपेन्द्र खत्री) लाई हत्कडी लगाउँछु ।
प्रहरी* ठीक छ, ठीक छ । म जेल जान तयार छु । सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दा हजुरले जेल पठाउनुहुन्छ भने हामी जान्छौं ।
आलम* अब असहज परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी तपाईं र एसपीले लिनुपर्छ ।
प्रहरी* शान्तिसुरक्षा गर्ने दायित्व हजुर (आलम) को पनि हो ।
आलम*तपाईंलाई के हुन्छ भन्ने त मेरो वकिल आउँछ अनि थाहा हुन्छ ।
प्रहरी* बरू को वकिल हुनुहुन्छ, हामी बोलाउन सहयोग गर्छौं । मर्जी होस् हजुर ।
आलम* (चर्को स्वरमा) हैन, मलाई तपाईंले जुन व्यवहार गर्नुभयो, त्यसको भुक्तभोगी तपाईं र एसपी हुनुहुन्छ ।
प्रहरी* हामीले त सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं हजुर ।
आलम* होइन, त्यसका लागि पुलिस लिएर जान मिल्छ ? मेरो भारतबाट…
प्रहरी* माननीयज्यूलाई सम्मानसाथ जयनेपाल, नमस्कार गरेर यस्तो आदेश छ हजुर भनेका छौं ।
आलम* होइन, तपाईंहरुले डकैतजस्तो व्यवहार गर्नुभयो । यही चोक (राजपुर/इन्द्रिस गेट) मा हजारौं मानिस जम्मा
प्रहरी* केका निम्ति हजुर ? हामीले त सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेका हौं । अब अदालतले फैसला गर्छ, भीडले होइन । हजुरको पक्ष ‘स्ट्रङ’ छ भने त्यसरी जाउँ न हजुर ।
आलम*होइन, तपाईं दुइटा पुलिस राखेर… (शब्द बुझिँदैन) गर्नुभएको छ, यसको भुक्तभोगी (जिम्मेवार) तपाईंहरु बन्नु हुनेछ ।
प्रहरी* हजुरले मलाई कहाँ दोष दिन मिल्छ र ? हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । हामी सामान्य कारिन्दा मात्रै हौं ।
आलम* हैन, हैन ।
प्रहरी* हजुरहरुले नै बनाएको कानुन कार्यान्वयन गरेका हौं ।
आलम र संजय टक्ला एकै ठाउँमा
ललितपुर : रौतहट बम काण्डमा संलग्नताको मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम सोमबार नख्खु जेलमा शान्त थिए। नख्खु कारागारको सीआरसी ब्लक टूको दोस्रो तलामा राखिएका उनी दुई जना लागुऔषध र एकजना चोरीको कैदीसँगै राखिएका छन्।
आलमसँगै जनकपुर बमकाण्डका अभियुक्त संजयकुमार साह ‘टक्ला’ पनि नख्खुमै छन्। साहले ५ जनाको ज्यान जाने गरी बम विस्फोट गराएको अभियोगमा नख्खुमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्।
आलम कारागारमा आएको दिन शनिबारदेखि नै शान्त छन्। उनलाई अन्य कैदीभन्दा आरामदायी कोठामा राखिएको छ। कारागारका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार उनको चालचलन शान्त रहेको छ। आलम सोमबार पनि जेलमा मान्छेहरूलाई उत्सुकताका साथ हेरिरहेका थिए। कालो हाइनेक, सेतो धोती र सफाचट जँुगामा चिटिक्क थिए। उनी अलिकति पनि विचलित देखिएनन्।
कारागार प्रशासनले अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने र शंकास्पद कैदीको क्रियाकलाप नियाल्ने र निगरानी गर्ने गर्छ। यसै सिलसिलामा आलमले आफ्ना छोरासँग गरेको कुराकानीबारे प्रशासनले निगरानी राखेको हो।
उनका छोराले कारागारमा कुनै पनि प्रकारका कुरा नगर्न सुझाएका छन्। आलमले गर्ने सम्पूर्ण कुरा प्रशासनले रेकर्ड गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्ने भएकाले सचेत रहन छोराले उनलाई सुझाएका छन्। तर कारागारले कुनै पनि कैदीबन्दीको भनाइ रेकर्ड नगरेको पौडेलले प्रष्ट्याएका छन्।
नख्खु कारागारमा कैदी बन्दीलाई पुस्तकालय, क्यान्टिन, सैलुन, किनमेल केन्द्र, पुल तथा स्नुकरलगायत खेल खेल्ने ठाउँ, आयआर्जनका काम सिक्ने अवसर, प्रत्येक दिनका पत्रपत्रिका पढ्न पाउने जस्ता सुविधा दिइएको छ। कारागारमा ८० प्रतिशत कैदी बन्दी आपराधिक क्रियाकलापका संलग्नता काराण आएका भए पनि २० प्रतिशत भने परिबन्दमा परेका रहेको प्रमुख पौडेलले बताए। सुरक्षाको हिसाबले चुनौती हुने भन्दै यतिबेला नख्खु कारागारभित्र जान कडाइ गरिएको छ।